कसरी ब्यानर छुटकारा गर्न
ब्यानर उन्मुक्ति कसरी, यो धेरै रोचक थियो, र साथै मलाई। सायद क्षण जब आउनेछ र त्यहाँ जस्तो कुरा हुनेछ। हालै, मान्छे झन् तिनीहरूलाई सामना गर्दै हुनुहुन्छ। यी धूर्त सन्देश संग, तपाईं क्रममा एक निश्चित संख्या सन्देश पठाउन चाहनुहुन्छ स्क्रिनको बीचमा झुन्डिएको मेहनत मार तस्बिरहरू यस प्रकारको छुटकारा गर्न।
त्यसैले ब्यानर छुटकारा कसरी प्राप्त गर्ने? कुनै पनि मामला मा, एक सन्देश पठाउन प्रयास नगर्नुहोस्! केही बस तथाकथित शंकास्पद साइटहरु जाने छैन, भाइरस एक टकराव बच्न सुझाव दिन्छौं। यो निकै बिन्दु यद्यपि, यी पृष्ठहरूमा आउँदै गर्दा कुनै पनि गोवर करार जोखिम निश्चित बढ्दै छ। तर, ब्यानर अप innocuous साइटहरु छानिएको र पूर्ण गर्न सकिन्छ। का हटाउने यसको विधिहरू जाँच्न प्रयास गरौं। ब्यानर छुटकारा प्राप्त गर्न, तपाईंले अग्रणी एन्टिभाइरस कम्पनीहरु को साइटहरु कुनै पनि भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटर को प्रत्येक मालिकले विश्वव्यापी वेब पहुँच एक सेल छ किनभने यो सजिलो बनाउन। तिनीहरूले जहाँ तपाईं सन्देश पठाउन जो एक नम्बर ड्राइव छ विशेष सेवाहरू, को वेबसाइटहरूमा उपलब्ध छन् - र खराब भाइरस बाट तपाईंले बचत गर्ने कोड दिइनेछ।
र के घटना मा आफ्नो आधार मा एक उपयुक्त कोठा त्यहाँ त्यसो गर्न? कसरी यस मामला मा blackmailer ब्यानरको छुटकारा गर्न? अन्यथा यो गर्नुपर्छ। ब्यानर सम्भव बनाउँछ भने तरिका, काम गर्न यो चलिरहेको कार्य प्रबन्धक मा प्रक्रियाहरु को सूची मा फेला पार्न प्रयास लायक छ - र थप प्रविधी को कुरा, यो सरल हुनेछ हटाउन। को wily भाइरस जस्तै अवसरहरू प्रदान गर्दैन भने, अक्सर हुन्छ जो, यो आवश्यक अन्यथा के छ। को रिबुट पछि, तपाईं F8 थिच्नुहोस् गर्नुपर्छ, र त्यसपछि electing समस्या निवारण प्रणाली को बहाली लागि विकल्प फेला पार्न सक्नुहुन्छ। तपाईं छन् भने कुनै पनि, तपाईं पछाडि कुनै भाइरस कहिल्यै थियो जब, समयमा Windows रोल गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। भयो? उत्कृष्ट, तपाईंको समस्या हल छन्।
भने, ब्यानर को हटाउनु कसरी? यो त हुन्छ भाइरस मेटाउँछ सबै अंक बहाल आफ्नो अक्सिजन ढाक्न। मा बुट गर्न - त्यसपछि सान्दर्भिक डाटा को हानि बिना तस्बिर हटाउन मात्र तरिका सुरक्षित मोड। यो मामला मा, ब्यानर देखिन्छ कि आशा छ। त्यसपछि ऊ पक्कै पनि केही अस्पष्ट नाम हुनुपर्दछ जसमा सुरुआतमा, खन्न सक्नुहुन्छ। कि पछि, यो धेरै सजिलो हुन पाउन। यदि र जब तपाईं सुरक्षित मोड मा शुरू, जुनूनी छवि अझै पनि निरन्तर देखिन्छ - सबै बस सिस्टम परित्याग र पुन: स्थापना गर्नुपर्छ। यस कार्यका पछि, भाइरस निश्चित लागि रहनेछैन। तपाईं आवश्यक सीप छैन भने गर्छन् - यो सामान्य मा छ, यो कुरा छैन - कम्प्युटरमा सेवामा श्रेय गर्न सकिन्छ वा समस्या बुझ्न गर्ने एक पेशेवर कल। तपाईं आफ्नो मा भाइरस को छुटकारा प्राप्त गर्न व्यवस्थापन भने, निश्चित हुन रजिस्ट्री सफा कुनै विशेष कार्यक्रम र आफ्नो पीसी एन्टिभाइरस ज्ञात स्क्यान गर्नुहोस्।
जब यस्तो विपत्ति सामना मुख्य कुरा हो - आतंक छैन, आफै एक ब्यानर तरिका आफ्नो कम्प्युटरमा डाटा बिगार्न गर्न असम्भाव्य छ। र तपाईं ले र इच्छित सन्देश पठाउन भने - यो एक निश्चित, कहिलेकाहीं धेरै सजिलै देखिने, पैसा को मात्रा गुमाउनु हुनेछ, र आवश्यक पासवर्ड प्राप्त भएन।
को ठहराव घुसपैठियों लागि गिर छैन। यसलाई जो थियो, यी ब्यानरहरू विशाल वर्ल्ड वाइड वेब मा पूरा गर्न जारी, र मान्छे आधुनिक प्रविधि परिचित सामना र समय समयमा तिनीहरूलाई छैन। यो भाइरस दबाब ठूलो खतरा छ कि छैन र एक सानो समझ व्यक्ति, कुनै शङ्का, हटाउनुहोस् बाध्य हुनेछन् हुनत बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ। आशा छ, यो पुस्तिका ब्यानर उन्मुक्ति कसरी तपाईं यसलाई सामना गर्न मदत गर्नेछ बताउँछ।
कसरी छ nvidia ग्राफिक्स चालक
कसरी सही वाइफाइ मार्फत मुद्रक जडान गर्न। सबै भन्दा साधारण त्रुटिहरू गर्दा जडान र कन्फिगर
NFC कसरी प्रयोग गर्ने? NFC प्रविधि
किन Windows बुट छैन, र के गर्ने?
कसरी बाहिर के तपाईं को लागि के तिर्न बिर्सनुभयो भने, टन को दर फेला पार्न
स्मार्ट कंगन Xiaomi एमआई ब्यान्ड: समीक्षा, पुस्तिका, समीक्षा
कसरी असक्षम गर्न "टन-जानकारी": मौसम वा समाचार
जहाँ यो आउँछन् - किन वर्षा गर्छ?
जो कोहीले कसरी उपनगरहरुमा अङ्गुर रोपेर गर्न थाह छ?
किशोर बालिका लागि कोट कसरी चयन गर्ने?
जापानी एसयूवी "इयुजु-रोयोडो": कारका प्राविधिक विशेषताहरू र फाइदाहरू